भेरी जत्तिकै लामो ईतिहाँस बोकेको जात व्यावस्थाको अन्त्य कहिले ? — Himali Sanchar
आश कुमार राई२०७७ जेठ ३१, शनिवार
२०७७ जेठ ३१, शनिवार
गत तीन हप्ता देखि यता नेपालको नयाँ नक्साको पुनर्जन्मको नाटकिय उत्सवलाई ओझेल पार्दै मान्छेहरु रुकुम र जाँजरकोटको समाजको अन्तरबिरोधहरुलाई ठिक ढंगले व्यावस्थापन गर्न नसकेको आरोप भेरी नदीलाई लाईरहेका छन् । जसले अन्तरजातिय प्रेम विवाहलाई स्वीकार गर्न सकेन। नयाँ सामाजिक परिवर्तन, रुपान्तरणको मेसोलाई बुझ्न सकेन् ।
त्यसैले प्रेमको एकोहोरो विश्वासमा परेका नवराज बिश्वकर्मा लगायतका पाँच जना साथीलाई भेरी नदीले निर्बस्त्र पारेर, नदीको बगरमा कहिले नउठने गरि पछार्यो। जसले विभिन्न कदका, विभिन्न रंगका र विभिन्न नश्लका, विभिन्न स्तरका रंगीन घटना, परिघटना र समाचार व्यापारीहरुलाई रोजगारी सृजना गर्यो र धेरैले रोजगार पनि पाए। यो ब्यापारको क्रम अझै, चली नै रहेको छ। बजारमा उक्त समाचार अझै बिक्री भइरहेको छ। तर सत्य तथ्य कुरो बाहिर कसैले ल्याउन सकिरहेका छैनन्। तर पनि सत्य कुरो भने सबैलाई छर्लंङ्ग थाहा छ।
सांसदभवन भित्रको माड्वाडी समाजमा समेत राम्रो स्थान पाएको उक्त घटनाले के संकेत गर्छ भने त्यो घटनाको बारेमा जे भएको हो। जुन कुरो सत्य हो । त्यो कुरो लेख्न र भन्न अहिले मिल्दैन। किनकी त्यो घटनाको बारेमा अरु कुरा मिलाएर अलि धेरै पृष्टको लामो र मोटो किताबी प्रतिबेदन बनाउनु पर्दछ । किनकी हाम्रो समाज एक शब्दमा बोलिने सत्य र एक पन्ना किताबको ज्ञानमा विश्वास गर्दैन। घण्टौं सम्मको फुलबुट्टे बाचन, भाषण, छन्द बन्द मिलेको रामायण, महाभारत, बेदान्त ज्ञान, पुराण जस्ता मोटो किताबमा मात्र विश्वास गर्दछ। जो पढिरहन पर्दैन विश्वास गरिदिए पुग्छ । हो यही नीर नवराज झुक्किए। उनि के भ्रममा परेका थिए भने यी सप्पै ज्ञानको मोटो किताब अब पुराना भए ।
काम नलाग्ने भए र ती सप्पै पुराना विभेदकारी ज्ञानको ठेलीहरुलाई खारेज गरेर विभेद रहित सबैको लागि सबैले पढ्न मिल्ने संविधान नामक एकथान किताब लेखिएको छ । जसले कसैलाई पनि विभेद गर्दैन । विभेद गर्ने मान्छेलाई दण्ड दिएर यो कानूनी राज्य हो भन्ने प्रत्याभूति गराउँछ । सायद उनलाई दम्भ भयो होला की म महान जनयुद्धको उद्गम थलोमा जन्मिएको मान्छे हुँ ।
जनयुद्धको केन्द्रीय राजधानीको नागरिक पनि हुँ । अझै उनको दम्भलाई उनको आफन्त र समुदायहरुको बलिदानी पुर्ण साहदातले माथी उठायो होला । जुन कुराहरु उनको भ्रम थिए । उनले बुझेनन कि अझै यो देशमा बाचन कला बिक्छ । रामायण, महाभारत, बेद, पुराण जस्ता ठुला ठेली वाला किताबको चाङले विभेद रहित नयाँ सम्विधानलाई थिचेर राखेको छ। किचेर राखेको छ। मिचेर राखेको छ। जसलाई पन्छाएर त्यसको धारा उपधाराहरु पढ्नु अघि ती माथिका ठुला ठेली वाला किताब पन्छाउने अधिकार उनलाई छैन । त्यो महान जनयुद्ध एउटा कालो ईतिहाँस भईसक्यो । अब उक्त जनयुद्धको ईतिहास महान बन्न सक्दैन भन्ने उनलाई हेक्का भएन होला ।
त्यो संबिधानमा जनयुद्धको केही सकारात्मक गुणहरु लेखिएको छ । त्यसै कारण ठूलो ठेली वाला माहाभारत, रामायण बेद जस्ता किताबहरुको चाङले संविधानलाई सबैभन्दा तल थिचेर राखिएको छ। उसको आफन्त, समुदाय र वर्गको बलिदानी क्रान्तिको बलिदानीपुर्ण वीरगति थिएन । ती त आतंककारीहरुको स्वाभाभिक संहार थियो । त्यसैले त जनयुद्धको महान नायकलाई चिँडिया घरको बाघ झैं खोरमा थुनेर मासु ब्यापारिको दोकानबाट मासु किनेर ल्याएर चण्डाल र जल्लादहरुको रेखदेख र निगरानिमा बेला बेला माथिबाट मासु खसाली दिएर मुस्किलले प्राण बचाई राखेका छन । अनि त त्यो महान क्रान्तिको अनुयायी हुँ भन्ने लाखौं मानिसहरुलाई भ्रममा बाँच्न सजिलो भएको छ ।
जसले यी सबै कुराहरुको पुष्टि गर्दछ । उनलाई यी परिवर्तनको वाईयात भ्रमहरुको कारण थाहा भएन होला कि म यो देशको दोश्रो दर्जाको नागरिक हुँ । मलाई यो देशको मुल समाजिक प्रवाहको मुलधारमा समाहित हुने अधिकार छैन । म मुलधारको मान्छे हुनु भनेको मुलधारलाई समर्थन गरेर जात व्यवस्थालाई ईमान्दार भएर पालना गर्नु हो । धार्मिक अनुष्ठानबाट नबरालिनु हो। म विभेदमा परेँ, म अन्यायमा परेँ नभनी चुपचाप आफ्नो कर्म र भाग्यलाई दोष दिएर बस्नु हो । म दलन भित्रै सिमित रहनु पर्छ । मैले ठूलो जातको तरुनी संग प्रेम गर्नु हुन्न भन्ने कुरा पनि उनले भुले होलान् ।
नयाँ संविधानलाई थिचेर राखिएको सबै भन्दा माथिको ती पुराना र बाक्लो ठेली वाला किताबहरुलाई नछोई हेरेर परैबाट ढोग्नु नै म मुलधार पक्षधरताको मान्छे हुँ भन्ने कुरा पनि उनले भुलेको हुनुपर्दछ । र त उनले नयाँ सम्बिधानमा उल्लेखित सामाजिक वहावको भावनात्मक मुलधारमा आफुलाई खोजे जुन व्यावहारिक मुलधार संग उसको सम्बन्ध नै छैन । त्यसैले त मुलधारको मुल सत्ताको सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरीले आफ्नै आँखा अगाडीको घटना देख्न सकेन । अनुसन्धान गरेर सत्य कुरा खुटाउन सकेनन् र भन्न सकेनन ।
मुलधारकै राजनीतिक प्रभावमा बनेको छानबिन समितिले सत्य र तथ्य धटनालाई भेट्नै सकेनन् । अर्का मुलधारकै पत्रकारिताको बोटमा फुलेर फलेर आफ्नो सम्मानित जीवन पकाएका निक्कै पाका र दह्रा खरा पत्रकारको निक्कै लुला र निरीह कुरा पनि आयो । उनी भन्छन् समाज नै एकापट्टी लागेर लखेटी लखेटी कुट्नु अक्षम्य गलत कुरा हो जुन निन्दनीय छ ।
नवराज बिक प्रतिभावान युवा हुन् । तर याहाँ नरसंहार तथा हत्या भन्ने शब्द फिट हुँदैनन् । भनेर वहाँले गरेको अनुसन्धानको रिपोर्ट रेडियोमा सुनियो । तर मुस्किलले उक्त घटनाबाट बाँच्न सफल भएका मानिसहरुले भनेका कुरा पिँडित पक्षले दाबी गरेको कुरा अनि लाखौं मानिसले सिधा अर्थमा जातको कारण घटेको घटना भनी थाहा पाएका सत्य कुराहरुको बारेमा राजनीतिक मुलधारका प्रशासन, छानबिन समिति तथा पत्रकारहरु कसैले देखेनन् ।
कसैले भेटेनन् । कसैले भनेनन्। अनि कसैले लेखेनन् । यसले के पुष्टि गर्छ भने यो मुलधार भन्ने शक्ति कत्ती कमजोर रहेछ? साथै वास्तवमा यो मुलधार भनेको के हो? मुलधारको चरित्र पक्षपाति नै हुन्छ त? मुलधारले अल्पसंख्यक र पिछडिएका समुदाय र वर्गहरु पर्ति विभेद गर्नै पर्छ त? उसको चरित्र कस्तो हुनु पर्छ? भन्ने प्रश्नहरुमा समेत यसले बहसको माग पनि गरेको छ । तर सत्य कुरा के हो भने सबैको सहअस्तित्व सहितको साझा विचार नै वास्तविक मुलधार हो । सबैको सहअस्तित्व नै मुलधारको आन्तरिक शक्तिको श्रोत हो । जुन सामाजिक र राजनीतिक आन्दोलनबाट प्रकट हुन्छ र आन्दोलनद्वारा नै स्थापित हुन्छ ।
जुन शक्ति र विचारको आधारमा समाजको सामाजिक, साँस्कृतिक, जीवन पद्धतिको विकास हुन्छ। जसलाई सामाजिक सत्ता भनिन्छ । त्यहिँ सामाजिक सत्ताको जगमा केन्द्रिय राज्यसत्ताको निर्माण हुन्छ । जसले तिनै विचार र व्यवहारहरुको संरक्षण गर्दछ । जसको उदाहरण प्रहरी प्रशासन, छानबिन समिति, पत्रकारहरुको रिपोर्टिङ र सरकारको तत्परता । यी सबै चित्त बुझ्दो छ त? कसैले चित्त बुझाएका छैनन् ।
हाम्रो समाजमा २००७ साल देखि परिवर्तनको कुरा हुँदै आएको छ । तर हाम्रो समाज २००७ साल देखि यता कती रुपान्तरण भयो? किन हाम्रो समाज रुपान्तरण हुन सकिरहेको छैन? २००७, २०४६ साल अनी दस बर्षे लामो महान जनयुद्ध पछिको २०६२-२०६३ सालको ऐतिहाँसिक जनआन्दोलन लगत्तैको मधेश आन्दोलन यी परिवर्तनका लागि जनहितको गरिएका आन्दोलनहरु थिएनन्? होईन, यी सबै परिवर्तन कै लागि भएका थिए । तर विडम्बना शासक परिवर्तन भयो व्यवस्था परिवर्तन भएन । परिस्थिती परिवर्तन भयो नीति परिवर्तन भएन ।
सामाजिक मानसिक्ता परिवर्तन भयो तर सामाजिक सत्ता परिवर्तन भएन । संविधान फेरियो मुल दर्शन फेरिएन । त्यसैले यो अन्तरजातिय विवाह संग जोडिएको रुकुम जाँजरकोट घटनाको बारेमा जसले जे भनेपनी । जसले जे अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन लेखे पनि यो जातिय विभेद तथा उच्च जातिय अहंकारको कारण सिर्जित एक स्वाभाविक परिणाम हो । जसले के स्पष्ट पार्छ भने नेपाली समाज अझै जात व्यवस्थामा आधारित छ । याहाँ भेरी नदिको वहाव जत्ती लामो छ त्यत्ती नै लामो जात व्यवस्थाको ईतिहाँस छ । भेरिको पानी जात्ति चिसो र क्रुर छ त्यत्तिनै चिसो र क्रुर जात व्यवस्था छ। भेरीको बाढी जत्ती खतर्नाक छ त्यत्तिनै खतर्नाक छ जात व्यवस्था । भेरी नदि तर्न जत्ती गाह्रो छ त्यत्तिनै गाह्रो छ यो जात व्यवस्थालाई फाल्न । र जसले जात व्यवस्थालाई उलंघन गर्छ उसको हालत नवराज बिश्वकर्मा र उनको साथीहरुको जस्तै हुन्छ ।
त्यसैले परिवर्तनको व्याख्या गर्नु मुख्य कुरो हैन रुपान्तरण कती भयो भन्ने कुरो मुख्य कुरो हो । यसलाई हाम्रो समाजको एक मानक घटनाको रुपमा पनि हेर्न सकिन्छ । त्यसैले ती नवराजको प्रेमिका सुष्मा मल्लले यतीबेला खुट्टा लुला बनाएर होईन खुट्टा दह्रो बनाएर उभिनु पर्दछ । अब आजै देखि उक्त जात व्यवस्थाको पर्खाल भत्काउने दृढ अठोटका साथ भत्काउन शुरु गर्नु पर्दछ ।
जती सुकै बनावटी प्रतिबेदन र अनुसन्धानहरु गरेर लेखिए पनि अदालत सामु सुष्माको साँच्चो र सत्य एक बयानले ती अनुसन्धान र प्रतिवेदनहरुलाई चकनाचुर बनाईदिने छ ।
त्यो सुष्माकै हातमा छ । मात्र सुष्माले हिम्मत जुटाउने साहस गर्नु पर्दछ । अपेक्षा गरौं अन्तिम समयमा सुष्माले आफ्नो प्रेमिलाई गुमाए पनि आफ्नो प्रेमी पर्तिको साँच्चो प्रेम दुनियालाई देखाउने छिन, सुनाउने छिन् । जात व्यवस्था विरुद्धको लँडाईमा लड्दा लड्दै भुँईमा लडेकी सुष्मा आफ्नो जिउको धुलो टक्टक्याउँदै उठेर यो जात व्यवस्था फाल्ने महान साँस्कृतिक आन्दोलनको नायिका बन्ने छिन् ।
सुष्माको यही भुमिका अहिले करोडौं मानिसहरुले अपेक्षा गरिरहेका छन् । सुष्मालाई यताबेला गाली गलोज गरेर हतोत्साहित पार्ने होईन साँच्चो बोल्ने हौसला दिउँ सत्य बोल्ने आत्माबल दिउँ सुष्माले सत्य कुरा बोलेर ती सबै भ्रमका पर्दा खसाल्नु नै आफ्नो मृतक प्रेमी संगको अमर प्रेम पर्तिको साँच्चो सम्मान हुनेछ । भने कुरुप जात व्यवस्था भित्र लोकतन्त्रको आबरणमा दलालहरु आफ्नो स्वर्ग कसरी टिकाई रहेका छन भन्ने कुरा संसारले थाहा पाउने छन् ।
त्यसैले यो बेला बिभाजित भएर बादबिबाद गर्नु भन्दा यो निन्दनीय क्रुर र पासबिक घटनाको पर्दाफाँस गरेर दोषीलाई कार्बाही गर्ने र यो जात व्यवस्थाको अन्त्यको निमित्त सकारात्मक भुमिका खेल्नु नै सच्चा प्रेममा अलाप भएका ती युवाहरु प्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुनेछ।